Uchwepheshe we-Semalt uchaza umehluko phakathi kwe-desktop ye-desktop ne-SEO yeselula
Ekuthengiseni kwe-digital, amasu amaningi we-SEO awacabangi ngamadivayisi abavakashisebenzisa ukufinyelela iwebhusayithi. Iningi lamabhizinisi ngokushesha likhohlwe ukwandisa amawebhusayithi abo ekusebenzeni kwefoni yeselula lapho befezaukuthuthukiswa kwewebhusayithi. Ucwaningo lwamuva luveze ukuthi amafoni omakhalekhukhwini athatha ama-desktops ekufakeni i-intanethi ngesilinganiso se-4%. Ngaphezu kwalokho,okuningi kwe-traffic injini yokusesha livela kumafoni eselula, hhayi kuma-desktop e-PC njengalawa ngaphambili.
Amanye amabhizinisi athatha le nzuzo ukugcwalisa igebe lemakethe - boat blue book value used boat. Ngokwesibonelo,iningi labantu basebenzisa umakhalekhukhwini ukuphequlula i-intanethi. NgoJanuwari kulo nyaka, i-Google yenza kucacile ukuthi enye yezindlela zazo i-algorithm yazoAmanethiwekhi amawebhusayithi yindlela indlela amasayithi eselula aphendula ngayo.
Ukusebenzisa injini yokusesha kuhilela ukwandisa ukubonakala kwewebhusayithi inthanethi.Izinjini zokusesha zihlanganyela kule nqubo. Iningi lezindinganiso zabo zibandakanya ukwenza amawebhusayithi ayenobungane. Kusuka kumthuthukisi wewebhuiphuzu lokubuka, ama-SEO amaqhinga amaningi amawebhusayithi axhumano asebenza kahle ahluke ngokuphelele ukuthi inguqulo yedeskithophu isebenza kanjani.
I-SEO yeselula ihlukile ku-desktop ejwayelekile ye-desktop. Uchwepheshe we i-Semalt Izinkonzo Zedivolumu, uRoss Barber uchaza izici zalehluko.
Indawo yangaphakathi yemiphumela..I-Google ngenhloso ibeka imiphumela yendawo ephakeme ngeselulaamadivaysi. Lokhu kuthuthukiswa kwenza i-SEO yangakini ifaneleke ngokuphelele kuwebhusayithi yeselula. Ukuseshwa kwe-Geo-modified kungafinyelela kumadivayisi weselula ngokushesha kunalokhobafika kuma-desktops. Ngesikhathi esifanayo, indlela efanayo edeskithophu ingaholela kokuqukethwe okuphindaphindiwe ezizindeni eziningi. Ngenxa yalokho, iningiizinkampani azizinaki lo mthelela. Noma kunjalo, ungazuza kulokhu ngokusebenzisa izizinda ze-canonical kwiwebhusayithi yakho yedeskithophu. Ngesikhathi esifanayo,Ukulungisa okuqukethwe kwisayithi yakho yeselula kuzobuyisela isixhumanisi sakho kanye negunya lekhasi ngokuqondisa kabusha okungu-301.
Izinkinobho zokushaya izingcingo zokushaya izingcingo. Abasebenzisi abaningi bewebhu baya kwiwebhusayithi ngolwazi nomaukuthenga. Amafoni omakhalekhukhwini adinga izinkinobho ezinkulu ezihlukanisiwe. Lesi sici sivumela abasebenzisi be-smartphone ukuthi bangakhathazeki nge-screen yabo yokuthintaokokufaka. Noma kunjalo, isikhombisi segundane singakwazi ukuhlukanisa izixhumanisi eziseduze kakhulu bese uchofoza ngamunye ngokufanele.
Okuqukethwe. Kuwo wonke umsebenzi wokuthengisa we-digital, amagama angukhiye nokuqukethwe yimibono esemqoka.Ukusebenzisa injini yokusesha kuhloswe ngamagama angukhiye nokuqukethwe. Nokho, indlela obeka ngayo amagama angukhiye kwiwebhusayithi yeselula akuyona indlelaihamba kwisayithi yedeskithophu. Isibonelo, ama-desktops adinga ukufaneleka kwe-brand kanye nokwazisa ulwazi. Ngenxa yalesi sizathu, okuqukethwe kwedeskithophu kungabafinyelela kumazwi angu-1000 bese usefonini encane ukuze ufake okuqukethwe ngokuhle. Kodwa-ke, lokhu akusiyo icala lomakhalekhukhwiniamawebhusayithi. Iziphequluli zefoni zisebenza kahle ngamafonti amakhulu nokuqukethwe okusukela kumazwi angu-300 kuya kumagama angu-700.
Amabhizinisi amaningi awahluleki ekuqalisweni kwemizamo yeselula lapho behlelaamawebhusayithi. Kunezindlela eziningi lapho i-SEO yeselula ihluke khona kwi-SEO yedeskithophu. Isibonelo, inqubo yeselula ye-SEO iqala ukusebenzisa kancaneokuqukethwe kumafonti amakhulu okuphambene nalokho i-Google efuna ekubekeni kokuqukethwe kwi-PC yedeskithophu. Amabhizinisi amaningi enzaamasayithi abo abanobungane abasebenzisa amaselula asevele evuna izinzuzo kulesi sinyathelo. Ngakho-ke, lokhu kungezwani kungasiza imikhankaso yakho ye-SEOukwandisa ukuphuma futhi uthole izivakashi eziningi kusuka kumadivayisi eselula.